ỤDỊ EGWU EGWUREGWU NKE AGONY NA-AGAGHỊ AHỤ ìHè - AKỤKỌ - 2019
Madmind Studio kwesịrị ịjụ ịhapụ nkwalite "nhụsianya" mgbe ọ pụtachara na nke a ga-eme ka nsogbu nsogbu ahụ pụta. Mgbe nke ahụ gasịrị, ndị mmepe kpebiri ịmepụta egwuregwu dị iche iche - Agony Unrated - ma n'oge a, a gbochiri ha ka ha ghara inweta ego na ihe isi ike. N'ihi ya, ndị na-agba chaa chaa agaghị enwe ike ịhụ ahụhụ na obodo mbụ ya.
Agony, wepụtara na May 2018 na PC, PlayStation 4 na Xbox One, natara ọtụtụ ntụle ọjọọ site n'aka ndị nkatọ na egwuregwu. N'agbanyeghị nke a, ego, ọrụ ahụ weere dị ka ihe ịga nke ọma - na ụbọchị atọ mbụ naanị ya, mmadụ 34,000 zụrụ egwuregwu na Steam.